ကိုယ့်ခေါင်းကို ကျောက်ခဲနဲ့ထုပြီး သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ ပခုက္ကူ ကဖြစ်ရပ် - VPS - Shweman Online Media
ကိုယ့်ခေါင်းကို ကျောက်ခဲနဲ့ထုပြီး သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ ပခုက္ကူ ကဖြစ်ရပ်
ကိုယ့်ခေါင်းကို ကျောက်ခဲနဲ့ထုပြီး သတ်သေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မဟုတ်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးတဲ့ ပခုက္ကူ ကဖြစ်ရပ်
အမှုမှာဒုရဲမှူး မင်းဇော်ဦးသည် ၂၀၁၉ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ရက်နေ့နံနက်၁၀၀၀ အ ချိန်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပခုက္ကူ မြို့မရဲစခန်းတွင်စခန်းမှူး တာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ပခုက္ကူမြို့ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ မြို့မလမ်းဘေး၊ ပညာရေးကောလိပ်ရှေ့တွင် လူ(၁)ဦးလဲကျသေဆုံးနေကြောင်း
သတင်းအရ ပခုက္ကူရဲစခန်း ကတာဝန်မှုး ဒုရဲအုပ်ယျာဇူးမောင်၊ ဒုရဲအုပ် ကျော်မင်း၊ နှင့်အဖွဲ့ သက်သေ အမှတ်(၁၅) ရပ်ကွက်မှ ရာအိမ်မှူးများဖြစ်သော ဦးအောင်တိုး၊ ဦးကျော်အောင်တို့နှင့်အတူ သွား ရောက် စစ်ဆေးရာ၎င်းနေ့ (၀၉၄၅)အချိန်ခန့်တွင် သေဆုံးသူ ဦးချစ်ကိုသည် စိတ်မူမမှန်သူ (စိတ်ပေါ့သွပ်သည်ပုံစံဖြင့် ပညာရေးကောလိပ်ရှေ့တွင် (၁ ဦးတည်းထိုင်ပြီး
ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက် ဖုံးပြောပြီးနောက် ဒေါသများ ထွက်လာပြီး အနီးရှိ ကျောက်ခဲဖြင့် ၎င်း၏ ဦးခေါင်းအား၎င်းကိုယ်တိုင် ထုရိုက်ကာ ဒဏ်ရာများရရှိ၍ လဲကျသွားသည်ကို လမ်းတစ်ဘက်ရှိကွမ်းယာဆိုင်မှ ဈေးရောင်းနေသူ ဒေါ်အေး(ခ)ဒေါ်ခင်အေးမှ မြင်တွေ့ရသဖြင့် ၊ ရာအိမ်မှူး ဦးအောင်ကြီးထံသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ခဲ့ရာများနှင့်ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့တို့မှ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာ ဦးချစ်ကိုမှာ
ရရှိဒဏ်ရာများ ဖြင့်သေဆုံးနေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ဦးချစ်ကို သေဆုံးမှုအား ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးပေးရန် သေမှုသေခင်း (၂၃/၂၀၁၉)ဖြင့်ရေးဖွင့်ခဲ့ပြီး ဒုရဲမှူး မင်းဇော်ဦး၊ အမှုစစ်၊ စခန်းမှူး၊ ပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်းမှုးက အခင်းဖြစ်ရပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ မြေပုံကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊သေဆုံးသူ အလောင်းအား ဆေးစာရေးသားပေးပို့ခြင်း၊
တရားလိုနှင့်သက်သေများကို စစ်မေးရာ သေဆုံးသူသည် စိတ်ပေါ့သွပ်သူပုံစံဖြင့် ၎င်း၏ ဦးခေါင်းအား ၎င်းကိုယ်တိုင် ကျောက်ခဲဖြင့်ထုရိုက်၍ ဒဏ်ရာများ ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်းဟုတ်/မဟုတ် သိရှိနိုင်ရန် သေမှုသေခင်းရေးဖွင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဦးသောင်းအေး(ပခုက္ကူ ခရိုင်)SHသတင်းဌာန၊ ရှုထောင့်မှုခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ်၊ အမှန်တရားဂျာနယ်
ဦးဦးသက် အထူးဟစ်တိုင် သတင်းအစုံ ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တဆင့်ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုယျ့ခေါငျးကို ကြောကျခဲနဲ့ထုပွီး သတျသတေယျဆိုတာ ဟုတျမဟုတျအမှုဖှငျ့စဈဆေးတဲ့ ပခုက်ကူ ကဖွဈရပျ
အမှုမှာဒုရဲမှူး မငျးဇျောဦးသညျ ၂၀၁၉ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ရကျနနေံ့နကျ၁၀၀၀ အ ခြိနျမကှေးတိုငျးဒသေကွီး ၊ပခုက်ကူ မွို့မရဲစခနျးတှငျစခနျးမှူး တာဝနျဆောငျရှကျနစေဉျ ပခုက်ကူမွို့ အမှတျ(၁၅)ရပျကှကျ၊ မွို့မလမျးဘေး၊ ပညာရေးကောလိပျရှတှေ့ငျ လူ(၁)ဦးလဲကသြဆေုံးနကွေောငျး
သတငျးအရ ပခုက်ကူရဲစခနျး ကတာဝနျမှုး ဒုရဲအုပျယြာဇူးမောငျ၊ ဒုရဲအုပျ ကြျောမငျး၊ နှငျ့အဖှဲ့ သကျသေ အမှတျ(၁၅) ရပျကှကျမှ ရာအိမျမှူးမြားဖွဈသော ဦးအောငျတိုး၊ ဦးကြျောအောငျတို့နှငျ့အတူ သှား ရောကျ စဈဆေးရာ၎င်းငျးနေ့ (၀၉၄၅)အခြိနျခနျ့တှငျ သဆေုံးသူ ဦးခဈြကိုသညျ စိတျမူမမှနျသူ (စိတျပေါ့သှပျသညျပုံစံဖွငျ့ ပညာရေးကောလိပျရှတှေ့ငျ (၁ ဦးတညျးထိုငျပွီ
ခေါကျတုနျ့ခေါကျပွနျ လမျးလြှောကျ ဖုံးပွောပွီးနောကျ ဒေါသမြား ထှကျလာပွီး အနီးရှိ ကြောကျခဲဖွငျ့ ၎င်းငျး၏ ဦးခေါငျးအား၎င်းငျးကိုယျတိုငျ ထုရိုကျကာ ဒဏျရာမြားရရှိ၍ လဲကသြှားသညျကို လမျးတဈဘကျရှိကှမျးယာဆိုငျမှ ဈေးရောငျးနသေူ ဒျေါအေး(ခ)ဒျေါခငျအေးမှ မွငျတှရေ့သဖွငျ့ ၊ ရာအိမျမှူး ဦးအောငျကွီးထံသို့ ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားခဲ့ရာ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျခဲ့ရာမြားနှငျ့ရာအိမျမှူးအဖှဲ့တို့မှ သှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ရာ ဦးခဈြကိုမှာ
ရရှိဒဏျရာမြား ဖွငျ့သဆေုံးနသေညျကို စဈဆေးတှရှေိ့ရသဖွငျ့ ဦးခဈြကို သဆေုံးမှုအား ဓမ်မတာအတိုငျး သဆေုံးခွငျး ဟုတျ/မဟုတျ စဈဆေးပေးရနျ သမှေုသခေငျး (၂၃/၂၀၁၉)ဖွငျ့ရေးဖှငျ့ခဲ့ပွီး ဒုရဲမှူး မငျးဇျောဦး၊ အမှုစဈ၊ စခနျးမှူး၊ ပခုက်ကူမွို့မရဲစခနျးမှုးက အခငျးဖွဈရပျစဈဆေးခွငျး၊ မှတျတမျးပုံရိုကျကူးခွငျး၊ မွပေုံကွမျးရေးဆှဲခွငျး၊သဆေုံးသူ အလောငျးအား ဆေးစာရေးသားပေးပို့ခွငျး၊
တရားလိုနှငျ့သကျသမြေားကို စဈမေးရာ သဆေုံးသူသညျ စိတျပေါ့သှပျသူပုံစံဖွငျ့ ၎င်းငျး၏ ဦးခေါငျးအား ၎င်းငျးကိုယျတိုငျ ကြောကျခဲဖွငျ့ထုရိုကျ၍ ဒဏျရာမြား ရရှိကာ သဆေုံးနသေညျကို တှရှေိ့ရသဖွငျ့ ဓမ်မတာအတိုငျး သဆေုံးခွငျးဟုတျ/မဟုတျ သိရှိနိုငျရနျ သမှေုသခေငျးရေးဖှငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
ဦးသောငျးအေး(ပခုက်ကူ ခရိုငျ)SHသတငျးဌာန၊ ရှုထောငျ့မှုခငျးနှငျ့သတငျးဂြာနယျ၊ အမှနျတရားဂြာနယျ
ဦးဦးသကျ အထူးဟဈတိုငျ သတငျးအစုံ ၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ တဆငျ့ပွနျလညျ ဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ။
လမ်းပိတ်ဆို့ ရန်ရှာရိုက်နှက်ပြီး ပိုက်ဆံလုယက်သူ (၈) ဦးကို ဖမ်းဆီး
မပူပင်မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာ နေနိုင်မယ့် ဗုဒ္ဒယတြာ
မနက်ခင်းမှာ ဒါတွေလုပ်ပေးရင် ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့ တစ်နေ့တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ
ရင်းနှီးလွယ်တတ်တဲ့ Extroverted Kpop Idol များ